Tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny jiro - Madagascar Informations
Tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny jiro
19 janvier 2016 11 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Tafapetraka tamin’ny fomba ofisialy ny Ben’ny Tanana ao amin’ny Kaominina Anjoma Betoha distrika ny Manjakanadriana.
Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana ny Lehiben’ny faritra Analamanga Atoa RAKOTONANAHARY Ndrato .
Asa goavana no fanamby hapetraky ny Ben’ny Tanana vaovao Atoa RAKOTOARIMANANA Henintsoa dia fanamboaran-dalana mba hanamora ny fidirana ao amin’ny Kaominina.
Tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny Jiro, nandritra ny fitondrana teo aloha dia efa misy ny ezaka natao mba hampidirana ny jiro fa tsy tontosa izany, nampanatena ny vahoaka ny Ben’ny Tanana vaovao fa hafainganina ny fampidirana ny jiro ary miantso ny Fitondrana mahefa mba hanampy amin’ny fanatanterahana ny asa.
Manoloana ny fidiram-bola ny kaominina dia ny fampahatsahivana ny vahoaka fa manana adidy izy amin’ny fampandrosoana ny tanana dia ny fandoavana ny hetra izany, misy ihany koa ny fitadiavana loharanom-bola hafa satria tsy masahana ny asa fampandrosoana ny hetra miditra ao amin’ny kaominina.
Hiezaka hanagana « Centre de formation sportive », ihany koa ny Ben’ny tanana vaovao, ny tetika dia ny hoe inona no hampalaza ilay kaominina , mba hafahan’ny olona mahafantatra izany kaominina Betoha izany.
Filazàna ho an’ny besinimaro.
Tanana voarindra, mikajy ny tontolo iainana, antoky ny fampandrosoana.
Ny làlana By-pass izay mirefy 15 km eo ho eo dia naorin’ny Fanjakana teo amin’ ny lemaka voatokana handraisana ny mety ho fihoaran’ny ranon’ikopa avy any ambony. Izany dia mba ho vahaolana amin’ny fifamoivozana eto Antananarivo. Nisy ny fandraisan’ny Fanjakana ireo tany izay voakasika tamin’ny fanamboarana ny làlana ary efa naloa ny tambiny tamin’izany.
Ny fisian’izany foto-drafitrasa izany anefa dia noraisin’ny maro ho fisokafan’ny lemak’Antananarivo ho amin’ny fitaran’ny tanàna izay efa tena tery tokoa na dia mbola natokan’ny drafim-panjariana ho faritra tsy azo anorenana aza ny manodidina ny By pass ankoatr’ireo faritra izay efa nisy tanàna . nisy ireo asa fametrahana tsatoka mamaritra ireo tany miankina mivantana amin’izany foto-drafitrasa izany sy ny fambolena zanakazo manaraka ny sisiny.
Tsapa anefa izay fotoana nisian’ny By Pass izay, ny firoboroboan’ny fangatahana fanorenana trano fonenana fonenana sy trano fiàsana manamorona ny lalàna sy amin’ireo faritra manodidina rehetra ary koa ireo tetikasam-panjariana isan-tokony atolotr’ireo tsy miankina. Tsy vitsy koa anefa ireo olona izay manao fanorenana tsy nahazo alalana ka manimba ireo faritra miankina mivantana amin’ny lalàna.
Mba hitsinjovana ny foto-drafitrasa sy ireo faritra natokana hoa n’ny foto-drafitrasa, ho fiarovana koa ny olona sy ireo mpampiasa vola mba tsy hanorina any amin’ireo faritra voarara tsy azo anorenana, ny ministeram-panjakana miahy ny fanajariana ny tany dia hampahafantatra ny olona amin’ny fomba rehetra ny votoatiny fanajariana azo atao eny amin’ny faritry By Pass sy ny fepetra rehetra arahina amin’izany.
Voalohany dia hatao ny fampahafantarana sy fiarovana ireo faritra miankina amin’ny fampiasàna ny lalàna, ary ireo faritra voatokana ho an’ny foto-drafitrasa eny amin’ny By Pass ka hovelomina sy hamafisina amin’izany ireo hazo novolena manaraka ny faritra miankina mivantana amin’ny lalàna (20 metatra na mihoatra miainga eo afovoan’ny arabe). Izany dia entina koa hanatsaràna ny endriky ny tanàna. Ny fambolen-kazo miisa 2000 mahery dia hotanterahin’ny mpiasa manontolo eo anivon’ny ministeram-panjakana miaraka amin’ireo sampandraharaha miankina amin’ny toy ny SEIMAD,ANALOGH, FTM, BPPAR …. Sy ireo kaominina 5 lalovan’ny làlana ny Zoma faha22 janoary 2016 ho avy izao.
Faharoa : hampahafantarina ny besinimaro ireo faritra tsy azo totofana fa tsy maintsy hijanona ho fambolena, ireo faritra atokana ho lakan-drano ary sokafana ireo faritra azo hajariana amin’ny fanorenana miaraka amin’ny fepetra fanajariana mifandraika amin’izany (toy ny haavon’ny fanotorana, ny hadirin’ny fanorenana, ny fikorianan-drano). Hatao ao anatin’ny fotoana fohy ny fandinihana sy fametrahana ny lamina fanokafana ireo faritra azo hajariana eny amin’ny By Pass ka hialohavan’ny famaritana ny toetoetry ny fikorianan-drano, mikasika ny ranon’ikopa, Ampasibe sy ireo lakandrano misy sy ireo tsy maintsy mbola haorina. Havaozina sy itarina ilay drafi-panajariana natao tamin’ny 2011 raha ilaina.
Ny Ministeram-panjakana misahana ny Fanajariana ny Tany sy ireo Kaominina 5 voatanisa mivantana amin’ny By Passs dia manainga ny olona rehetra izay te-hividy tany eny amin’ny faritra iny mba hamantatra tsara ireo fepetra-panajariana mikasika ny tany hovidiana eny anivon’ny Kaominina misy ny tany na ny sampandraharahan’ny fanajariana ny tany Analamanga eny Ambatomena alohan’ny hividianana azy. Hamoraina ny fazahoam-baovao amin’izany aorian’ny fivoahan’io lamina io. Hampafantarina ny olona amin’ny fomba rehetra ny votoatin’ny drafitra fanajariana nohavaozina mikasika ny By Pass ka iarahana amin’ireo Ben-ny Tanàna, ny teknisiana ary ny fokontany izany.
Ho anareo rehetra izay nanana tany na ampahan-tany voakasika tamin’ny fanamboarana ny làlana By Pass kanefa manana olana dia iangaviana hanantona ny service expropriation eny amin’ny Domaines eny Anosy fa hisy tompon’andraikitra afaka manome fanazavana anareo amin’izany. Eto ny taratasy mikasika ny taninao.
Entanina isika rehetra mba hifanome Tanana hiaro ireo zanakazo novolena.
Natao izao fanapahan-kevitra izao mba hisian’ny fampiroboroboana sy fampandrosoana ny fanajariana ny tanan’Antananarivo izay efa mitatra amin’ireo Kaominina maro manodidina sy mba hisian’ny tanàna mandroso, mivaotra sy miroborobo araka ny vina napetraka tamin’ny fihaonambe ho an’ny tananan-dehibe teto Antananarivo.
Ny Minisim-panjakana Misahana ny Tetikasan’ny Filoham_pirenena, ny Fanajariana ny Tany sy ny Fampitaovana.
Ny Tale jeneralin’ny Fanajariana ny Tany.
Ny Ben’ny Tanàna 5 eny amin’ny By Pass (Andoharanofotsy, Ambohijanaka, Ankaraobato, Alasora, Ambohimangakely).
← Mpianatra miisa 30 hiofana any Maurice – InsPNMad
UNE ATTENTION PARTICULIERE SUR LES DROITS DE LA FEMME →
MPANENDAKA TRATRAN’NY POLISY MPANAO FISAFOANA TEO AM-PANAOVANA NY ASA RATSINY
Mih’art culinaire vous offre une formation gratuite en cuisine
26 mai 2017 Madagascar Informations 0
3 juillet 2017 Gasikara 0